Iinkonzo ezi-5 ezilungileyo zokuyila incwadana kwiMac yakho | Ndisuka mac
Ngaphakathi kwindibano yezixhobo zentengiso zedijithali ezikhoyo namhlanje, ukuthengisa nge-imeyile kuyaqhubeka ukuba, ubuncinci, yeyona nto ibaluleke kakhulu. Sithetha ngabantu abadumileyo newsletter, inkonzo efana nale sinikezela ngayo kuSoy de Mac (ngasekunene kwale migca) kwaye, simahla, ikuvumela fumana iindaba kunye namanqaku onomdla kuwo ngokuthe ngqo kwibhokisi yakho ye-imeyile.
Ngaphandle kokubaluleka kokuthengisa nge-imeyile, kunye nokuthandwa okukhulu kweekhompyuter kwi-apile yokulunywa, namhlanje baninzi abantu abaqinisekileyo ukuba ukusuka kwi-Mac ngekhe bakwazi ukuyila incwadana. Akukho nto iqhubekayo kwinyani. Nangona kuyinyani ukuba kukho izicelo zale njongo ezingahambelaniyo neMacOS, kuyinyani ukuba kukho umdla usetyenziso kunye neenkonzo onokuyila ngazo ileta yeendaba kwiMac yakho. Ngaba unesibindi sokufumana ezinye zeyona nto ibalaseleyo?
Kububudenge ukucebisa ezinye izicelo kunye neenkonzo ukuyila incwadana yeendaba kwiMac, ngaphandle kokuqonda kuqala izibonelelo eziziswa yile, ke, masiqale ekuqaleni:
1 Kutheni kubalulekile ukuthengisa nge-imeyile?
2 Izixhobo zokwenza incwadi yeendaba kwiMac yakho
2.3 Thumela imeyile
2.4 Umyili wemeyile kunye noMyili wePosi Pro 3
2.5 Incwadana yeendaba2Go
Kutheni kubalulekile ukuthengisa nge-imeyile?
Ekuqaleni kwesi sithuba, sichaze ukuba incwadana yeendaba yinkonzo yasimahla ekuthi umsebenzisi wephepha lewebhu abhalise kuyo ukuze afumane iimpapasho ezibaluleke kakhulu kuye kwibhokisi yemiyalezo ye-imeyile. Le nkcazo ilula sele isinika umbono wehlabathi wento i izibonelelo eziphambili zencwadana. Ndiyabulela kwesi sixhobo, iinkampani kunye namajelo eendabaBanokugcina unxibelelwano oluthe ngqo ngakumbi kunye nabasebenzisi babo (abathengi, abafundi ...) kwaye oku, nako, kuququzelela kwaye kukhuthaze ukuthembela kwabo kwi-brand, kwaye kwandise ukugcinwa okanye ukuthembeka; kwelinye icala, "umthumeli" uqinisekisa ukuba umxholo wayo ufikelela eluntwini esele lubonise umdla.
Ngokombono womfundi, umthengi okanye umsebenzisi, izibonelelo zibonakala nangakumbi: unokufumana kwibhokisi yakho yeposi ukuba yintoni oyithandayo, ngaphandle koloyiko lokulahleka nantoni na, kunye nentuthuzelo onokuyifunda xa ikulungele.
Kodwa njengephepha lewebhu, nencwadi okanye ngeMac yethu, ukupakisha kubaluleke kakhulu, kwaye ke into ebalulekileyo kukuyila incwadana yebhlog yakho, inkampani yakho, njalo njalo. Ukwenza oku, ezinye zezixhobo ezifanelekileyo zezi zilandelayo.
Izixhobo zokwenza incwadi yeendaba kwiMac yakho
I-Mailrelay sesinye sezixhobo esinokuzisebenzisa incwadana yeendaba yoyilo y lawula imikhankaso yakho yokuthengisa nge-imeyile. Inkonzo inephaneli yohlalutyo nazo zonke iintlobo zemetriki kunye nenkonzo yokuposa ekrelekrele oqinisekisa ngayo ukuba incwadana yakho iyakufikelela kubo bonke ababhalisile.
Nangona iMailrelay iyinkonzo ehlawulwayo, inezicwangciso ezibini ezikhululekileyo ngokupheleleyo Ngayo unokulawula indawo yogcino lwedatha ukuya kuthi ga kubabhalisi abangama-15.000 kwaye uthumele kwi-imeyile ezingama-75.000 simahla. Ixesha elingaphezulu unokwenza ukutsiba kuzo naziphi na izicwangciso zenyanga abazibonisayo.
Uninzi lwenu luya kuyifumana le nkonzo iqheleke kakhulu, ngenxa yelogo yayo, kuba imalunga nayo enye yeenkonzo zokuyila iindaba ezaziwayo nezisasazekileyo zehlabathi.
Njengoko iyinkonzo ekwi-Intanethi, unokuyiphatha MailChimp ngaphandle kweengxaki ezivela kwi-Mac yakho kwaye ngenxa yoko uthathe inzuzo yezibonelelo zayo ezintle apho Ukudala uluhlu lwabasebenzisi ngamaqela anomdla, Ukudala kunye nokuhanjiswa kwe imikhankaso ye-imeyile uluhlu oluthile ngendlela elula enkosi ku-colubanzi kunye nolungiso lomhleli yamaphulo, iindidi ezininzi ze templates onokuyisebenzisa, njalo njalo. Ukongeza, unokuseta ukuthunyelwa kwee-imeyile ngokuzenzekelayo kwaye wenze ngokupheleleyo uphononongo lwamaphulo akho ukwazi eyona mpembelelo.
Thumela imeyile luhlobo lwesicelo seendaba esenziwe ngokukodwa seMac esivumayo yenza iikhampasi zentengiso kunye neentsingiselo ezisebenzayo ngaphandle kwemfuneko yolwazi lwangaphambili kunye nokucofa nje okumbalwa. I- "EmailBuilder" yabo ngumyili weendaba onomdla obonelela ngaphezulu kweetemplate ze-800 kwaye isekwe kwinto elula njengokutsala kunye nokuwisa. Ukongeza, ungangenisa abafowunelwa ngaphandle kwemida kwaye usebenzise iifayile ukuze ujolise kubaphulaphuli abafanelekileyo. Kodwa ezi zezinye zeenzuzo zayo, ke siyakumema ukuba ujonge kuyo.
Umyili wemeyile kunye noMyili wePosi Pro 3
Simi ngaphambili Iigugu ezimbini eziyinyani zokuyila incwadana yeendaba ekhangeleka ngobuchule kwi-Mac. Eyokuqala yazo ijolise ngakumbi kwintengiso ye-imeyile "ngokuthe ngqo" (intengiso), ngelixa eyesibini ijolise ngakumbi kwiileta ezinje ngeSoy de Mac.
Kodwa kumacala omabini, Inkqubo yoyilo lwencwadana yakho ilula njengokuba igqityiwe Ewe, ukuqala kuyo nayiphi na itemplate okanye uyilo olungenanto, unayo yonke into oyifunayo ukubandakanya naluphi na uhlobo lwento kwii-imeyile zakho (ividiyo, imifanekiso, isicatshulwa, amakhonkco ...) kwaye wakugqiba, ungathumela imeyile ngokuthe ngqo kwi usetyenziso.
Kwaye siphela ngo Incwadana yeendaba2Go, inkonzo ekwi-Intanethi eyilelwe ngokukodwa ukuyila incwadana yeendaba kwi-Mac okanye nayiphi na enye ikhompyutha. Kule meko imeko ye- lula kakhulu ukusetyenziswa lolunye lweempawu zayo ezibalaseleyo, enkosi kumhleli wephepha elinomdla kakhulu Iitemplate ezingama-50 zasimahla.
Con Incwadana yeendaba2Go Ungayila incwadana yeendaba yenkampani yakho okanye ibhlog yakho ngokongeza imifanekiso, izicatshulwa, amakhonkco, nokunye okuninzi. Kwaye unayo Ukuhanjiswa kwe-1.000 ngenyanga simahla, ke akukho sizathu sokuba ungazami apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Iinkonzo ezi-5 ezilungileyo zokuyila incwadana kwiMac yakho